Mareykanka ayaa ugu hanjabay wadamada jebiya cunaqabateynta saaran Iran inuu ka xiranayo… – Hagaag.com
Mareykanka ayaa ugu hanjabay wadamada jebiya cunaqabateynta saaran Iran inuu ka xiranayo…
Wasiirka arrimaha dibedda Mareykanka Mike Pompeo ayaa shaaca ka qaaday in uu wali sii jiro cunaqabateynta hubka ee saaran Iran kaas oo xilligiisu dhacayo maanta islamarkaana Qaramada Midoobay ka diiday in lasii wado.
Mareykanka oo go’aankiisa ku aadan in lasii wado cunaqabteynta hubka ayaa iminka ugu hanjabay waddamada jabiya cunaqabateyntaasi oo sharci ahaan ku eg maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 20-ka bisha September.
“Haddii ay jabiyaan cunaqabateyntan saaran Iran waddamada Qaramada Midoobay ka tirsan, waxaa qaadeynaa talaabooyin falcelin ku ah”, ayuu yiri Pompeo.
Waddamadan uu u hanjabayo ayaa ka mid ah Ingriiska, Fransiiska, Jarmalka, Ruushka iyo Shiinaha oo ay ku wada jireen heshiis sannadkii 2015 lala galay Iran oo ku aadanaa xakameynta hubka Nurkiyeerka balse uu heshiiskaasi markii dambe ka baxay maamulka Trump.
Waddamadan ayaa ku andocoonaya in Mareykanka uu sharci ahaan ku khaldan yahay arrintan islamarkaana uu qaado tallaabo kaligiis ah.
Mareykanka ayaa ugu hanjabay waddamada jabiya cunaqabateyntan in uu ka xiranayo suuqiisa ganacsiga.